Kumxholo othi Ngubani Owenza oonodoli bothando obufana noBomi
Malunga nokuveliswa kweedodoli zesini, mhlawumbi kukho le miba ilandelayo. Eli nqaku liza kuchaza ixesha elidlulileyo nelikhoyo ngoku Iidola zoThando ukusuka kwimiba yemvelaphi, ukusasazeka kunye nophuhliso loonodoli besini, kunye nomzekelo wangoku.
Indawo ethile yoonodoli bokuqala besini--imvelaphi yonodoli wothando
Ngokweerekhodi zembali, umqambi wokuqala wedoli e-inflatable wayengenaye umdali othile. Abanye oonodoli bokuqala besini kuvakala ukuba badalwe ngoomatiloshe baseFrentshi nabaseSpain ngenkulungwane ye-16, ababeza kubekwa bodwa kuhambo olude ngenxa yobulolo kunye nokuphulula amaphambili emveli okungayi kukwanelisa iimfuno zabo zebhayoloji, ke aba matiloshe babeka I-Earliest. oonodoli bokuphulula amalungu esini benziwe ngelaphu elithungiweyo okanye iimpahla ezindala, ezizezona ziphambili zoonodoli besini banamhlanje.
KwiSini Ngexesha Lethu, uBloch ubhala athi: Enye yezona zinto ziqala ukubonwa ngoonodoli bezesondo ezenziwe ngokwenziwa baqala ngo-1908, kwaye kule nkalo sinokubhekisa kukrexezo oluphenjelelwa kukuxelisa umzimba womntu okanye amalungu athile omzimba womntu. Kulo mmandla wetekhnoloji ye-erotic zikhona ii-Vulcanson zokwenyani, oomatshini abakrelekrele abenza imizimba epheleleyo yamadoda okanye abasetyhini ngerabha kunye nezinye izinto zeplastiki, njengamadoda okanye abafazi baselwandle, banokufikelela ekukrexezeni. Eyona nto ikhethekileyo kukuba amalungu okuzala amelwa ngendlela yokwenyani. Nokuba imfihlo ye-Bartholin's gland ifaniswe neoli ezaliswe "yi-pneumatic tube". Ngokufanayo, i-semen ekhutshiweyo ixeliswa ngulwelo kunye nezixhobo ezifanelekileyo. Le android yathengiswa ngokwenene kwiikhathalogu zabenzi abathile be "Rubber Goods in Paris".
Nangona kunjalo, ngo-1918 umculi u-Oscar Kokoschka wenza unodoli wesondo olingana nobomi kumenzi wesondo wesondo waseJamani, kodwa umenzi wedoli yesondo akazange aneliseke ngonodoli wesini kwaye wayitshabalalisa. unodoli wokwenene esidlweni.
Ukusasazwa koonodoli besondo kunye nophuhliso
Ngomnyaka we-1930, "uyise woonodoli banamhlanje" - umzobi waseJamani we-surrealist uHans Bellmer waqhubela phambili impembelelo yoonodoli besondo kwixesha elizayo. UBellmer wayila oonodoli abathathu abagqibeleleyo bezesondo. Ihlabathi lobugcisa behlabathi ngelo xesha lenza amaza ngokukhawuleza, kwaye eli xesha likwabizwa ngokuba yi "sex doll boom period".
Noko ke, kukho impikiswano embalini yokuba ngoobani ababesenza oonodoli besini, njengoko kukho ingxelo ethi “iJamani yamaNazi,” umbutho wamaNazi owawukhokelwa nguAdolf Hitler, wenzela amajoni oonodoli ngokwesini ebudeni beMfazwe Yehlabathi II. Kodwa akukho mthombo uthembekileyo uqinisekisiweyo, ngoku uthathwa njengenkohliso.
Malunga neentsuku zokuqala zesiphithiphithi sasekhaya eNetherlands, amaDatshi athengisa ezinye zezi nodoli kwiJapan ngenxa yezizathu zembali nezoqoqosho, kwaye igama elithi "umfazi waseDatshi" lisasetyenziswa ukubhekisa kwisini kwishishini lenkcubeko yaseJapan namhlanje. Umthombo woonodoli, kunye nanamhlanje Unodoli wesini waseJapan iphuhliswe kakuhle, kunye neshishini lonke loonodoli besini.
Kamva ekupheleni kwenkulungwane yama-20, abantu babengonelisekanga bubuchwephesha bokuvelisa unodoli ngokwesondo, ngoko emva kokutsiba okuliqela kweteknoloji kwimveliso. Ngeminyaka yee-1970, i-vinyl, i-latex, kunye ne-silicone yayizezona zinto zisetyenziswa ngokuqhelekileyo ukwenza iidoli zesini; i-silicone, ngokukodwa, ivumele iqondo eliphezulu lobunyani, isenza oonodoli be-silicone besini ngokumangalisayo bafane nobomi.
IMeko yeMarike kaNodoli yanamhlanje
Imarike yenodoli yanamhlanje igcwele zonke iintlobo zoonodoli abatsha besini, kwaye oonopopi abancinci besini thatha isabelo esikhulu soonodoli besini. Ukususela kumbono wezinto eziphathekayo, kukho iidoli zesondo ezixhamlayo, iidoli zesini ze-TPR, kunye isondo unodoli torso Ezi ntlobo zintathu zezalamane. Ixabiso eliphantsi kwaye linexabiso eliphantsi, kwaye ezona zixhobo zidumileyo ngoonodoli besondo be-tpe kunye noonodoli besini be-silicone, abashushu kakhulu kwimarike yoonodoli besini.
Ngophuhliso lwehlabathi, kuya kubakho oonodoli bezesondo bemveli, kwaye kuya kubakho ukuxelisa kunye noonodoli bomgunyathi kwimarike, bazaliswe ngamavumba amaninzi acaphukisayo, ngakumbi angathandekiyo, akulula ukuwacoca, njl. Kwinani elikhulu labathengi boonodoli besini, ngokungathandabuzekiyo yintlekele yembali, kwaye ikwayinkohliso, kodwa kukwakho nabarhwebi abalumkileyo, abafana noonodoli besini abathengiswa ngeeurdoll, ezisesikweni kakhulu. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, unokuphinda uqhagamshelane Inkonzo yabathengi icela ulwazi oluthile olufana neevidiyo zoonodoli bezesondo, imifanekiso yefektri yezocansi, njl., Ukukhusela amalungelo akho asemthethweni kumthombo.
Ukuba unodoli wesondo oyifunayo awufumaneki kwiwebhusayithi yethu, nceda ucofe kwi unodoli wesini iphepha ukuqhagamshelana nenkonzo yethu yabathengi yobungcali. , ezifana eziqhelekileyo Iidola zeWM, Unodoli weIrontech, njl. Siyi-agent ye-doll yesini yobuchwephesha kunye nesesikweni, nokuba uthanda i-silicone ecocekileyo Unodoli weZelex, XYCOLO unodoli okanye njenge-elf style Unodoli we-MOZU, sinokukwanelisa.
Ukuba awukuthandi ukulinda ixesha elide kwaye ufuna ukufumana unodoli wothando oyifunayo ngokukhawuleza, nceda ucofe i Ukusuka USA iphepha, oonodoli apha bonke Kwimpahla yoonodoli besondo, akukho mfuneko yokulinda ixesha elide, i-fastest yi-3-5 iintsuku, kwaye i-slowest yi-7- Kwiintsuku ezili-10, idoli yakho yesondo ethengiweyo iya kuhanjiswa kuwe. Ingaba ulunde ntoni?
Enyanisweni, akufuneki ukuba siphande ukuba ngubani owenza iidoli zesondo, kuba sonke siyazi ukuba ukuvela kweedoli zesini kuyindlela kunye nesiqhelo kwimbali, ngoku ukusuka kwi-masturbation i-sex dolls ukuya kwi-inflatable sex dolls, i-TPR yoonodoli besondo, Oonodoli besondo be-Tpe, Iidola zesondo eziSilicone kwaye I-AI-Tech oonodoli besini ngoku, nokuba ngoonodoli besini besintu okanye oonodoli besondo abahlakaniphile, babonelela ngeenkonzo ezithembekileyo kuwo onke amagcisa aneemfuno zomzimba okanye isini sokuhombisa. Unokuhlala uthemba ivenkile ye-urdolls, i-urdolls ithengisa kuphela iidoli zesondo ezinelayisensi ngokusemthethweni, zigatya i-fakes.
Kufakwe kwi: benza oonodoli besondo oonodoli bothando benziwe unodoli wokwenene
Uya kufumana ulwazi oluninzi malunga noonodoli abatsha besondo
Ukhetha njani ubungakanani kunye nobunzima bedoli yesondo?
Kutheni unganiki unodoli wakho wesondo iseti entle yeengubo zangaphantsi? Uya kunandipha zonke iimpawu ezinodoli omtsha wezocansi Ungafumana amaxabiso amahle kufutshane necandelo le-Love Doll
Lithini ixabiso loonodoli besini elifanelekileyo kum? Ungazenza njani ezona dololo zibalaseleyo zesini? Ndingayikhetha njani inketho yodoli?
Ukucoca unodoli imiyalelo Inkathalo yeWig yoGcino Isikhokelo sokuthenga Unodoli weSilicone Japanese
Iimveliso eziDumileyo zoDoli boSondo
I-Remy Blonde Real Sex Doll eBomvu Top 165CM Amehlo amakhulu TPE Material Bi ...
Imbali yemvelaphi ye-Remy: I-Remy yi-TPE Material unodoli wesondo kunye nobude be-165cm. Ingabonakala idinayo, kodwa sebenzisa ingcamango yakho ukwenza oonodoli besondo abancinci babe ngamava amnandi, kwaye ngokukhawuleza uza kuzifumana ujonge phambili ekuhlambeni kunye nexesha lomgubo. . Khawubuye umva kwakamsinyane indlela eyiyo yokuphulula intombazana oi ...
UAshlyn Umfazi omncinci otyebileyo othanda unodoli othengiswayo Amabele amakhulu Iimpundu ...
Imbali yemvelaphi ka-Ashlyn: U-Ashlyn unodoli wezocansi we-TPE ubude be-153cm. Ubuhle obuphambi kwam benza intliziyo yam ishukume, kwaye andizange ndikwazi ukubamba iiDoli ze-UR ngokuqinileyo ezingalweni zam kwakhona. Ndawola ivumba elifudumeleyo lenephrite ezingalweni zam, ngelixa ndiphuza inwele ezithambileyo ezinodoli wesondo, ngelixa mak ...
UMarie Innocent Unodoli Wothando Omhle E-Cup Naughty TPE 159CM ende emnyama ...
Ibali lemvelaphi kaMarie: UMarie unodoli we-TPE wesondo kunye nobude be-159cm.Emini ekhanyayo, engceni yasendle, unokubona indawo enhle ngaphandle kokufunyanwa, le nto iyona nto inomdla kunye nentsha, kwaye rhoqo apha, oonodoli bam bezesondo kwaye ndiyakwazi ukukhuthaza olona thando lukhulu.
Ingelosi yaseMalaysia Oonodoli bezesondo bayathengiswa D-Cup amehlo aBrown TPE 160C ...
Imbali yaseMalaysia yaseMalaysia: IMalaysia iyidoli yesondo ye-TPE enobude obuyi-160cm.I-Irontech Doll yaxutywa ngezandla zam, umzimba ujijekile ngamandla, wenza isandi esithandekayo esikhefuzayo, izandla zoonodoli wesini zehla esifubeni sam, zachukumisa i-crotch yam, kwaye ndavula iziphu ngobunono, ndafaka isandla sam sasekunene, ...
Idoli encinci yesini